Somaliland: Guddoomiye CIRRO oo sheegay in kala Xadeynta Deegaannada Waqooyiga Hargeysa loo raacayo Sharcigii Lixdankii - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Guddoomiye CIRRO oo sheegay in kala Xadeynta Deegaannada Waqooyiga Hargeysa loo...
uddoomiyaha Golaha Wakiillada Somaliland, ahna Guddoomiyaha Xisbiga Mucaaradka ah ee WADDANI Md. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi (Cirro), ayaa ka hadlay Muran ka taagan Deegaannada Lixda ah Waqooyiga Gobolka Maroodi-jeex, kuwaas oo doorashooyinkii kala dambeeyay ee Dalka ka dhacay looga qaban waayay muran u dhexeeya Dadka deegaannada AWDAL, SAAXIL iyo Maroodi-jeex, inkasta oo deegaannadaasi ku yaallaan Waqooyiga Caasimadda Hargeysa.
Deegaannada muranku ka taagan yahay oo qay ka mid yihiin Cabdi Geeddi, Ceel Sheekh iyo Hadeyta oo dhawaan Komiishanku raaciyey degmada Lughaya ee Gobolka Awdal isla-markaana Diwaangelinta laga qabtay, ayaa Guddoomiyaha WADDANI sheegay in Xukuumadda looga fadhiyo inay xad u kala samayso lixda deegaan, si buu yidhi Dadka ku dhaqan uga qayb-galaan doorashooyinka soo socda.
Md. Cirro oo Shalay u waramayey Telefiishanka Star, ayaa isagoo arrimahaa ka hadlaya yidhi, “Komiishanku waxay soo bandhigeen in Dadka ku nool Lixdaa Goobood Xaqooda la siiyo (Codeynta Doorashooyinka), waxayna soo bandhigeen in Waajibka kala xadeynta Xukuumaddu leedahay, Annaguna waanu ku taageernay Komiishanka, waxa la isla qaatay laba Qodob oo mid laga filayo in Xukuumaddu fuliso, midna Komiishanku. Mid waxa weeyaan iyadoo la raacayo Dastuurka Somaliland iyo siday Xuduudaha Degmooyinku kala ahaayeen 1960-kii, iyadoo la raacayo wixii kale ee Shuruuc ah ee Qaranku leeyahay in Xukuumaddu muddo kooban oo ah intayna Diwaangelintu ka bilaabin labada Gobol ee dambeeya soo saarto kala xadeynta iyo Meeshay ku dareyso, iyadoo u raaceysa sida Dastuurka iyo 1960-kii siday Xuduuduhu kala ahaayeen, taana Xukuumadda ayaa laga filayaa. Ta labaadna waxa weeyaan markay Xukuumaddu soo saarto (Kala Xadeynta Degmooyinka Waqooyiga) in Komiishankuna uu fursad siiyo Shacabka ku dhaqan Lixdaa Goobood (ee Waqooyiga Hargeysa), Sharci dejintuna (Baarlamaanka) wuxuu arrinkan ka soo gelayaa inuu ansixiyo marka Xukuumaddu kala xadeyso degmooyinkaa, markaa Waajibaadkaasi Xukuumadda ayuu ku laalan yahay.”
khilaafka xadynta m-jeex